Amakhemikhali ahlobene ne-bioaerosol - Abakhiqizi base China Bioaerosol abahlobene nabaphakeli
I-ZR-6010 isithombe se-Aerosol
I-ZR-6010 i-Aerosol photometer yakhelwe ngesisekelo se-Mie scatter, esetshenziselwa ukuhlola ukuthi kukhona yini ukuvuza kusihlungi se-HEPA. Ithuluzi lihambisana nezinga elihlobene likazwelonke nelomkhakha, lingathola ukutholwa okusheshayo kokutholwa kokuhlushwa okungenhla nokwenyuka komfula kanye nesikhathi sangempela sokubonisa ukuvuza kumsingathi nasocingweni oluphathwayo, futhi kungathola indawo evuzayo ngokushesha nangokunembile. Kusebenza ekutholakaleni kokuvuza kwegumbi elihlanzekile, ibhentshi le-VLF, ikhabethe le-biosafety, ibhokisi legilavu, i-HEPA vacuum cleaner, uhlelo lwe-HVAC, isihlungi se-HEPA, isistimu yokuhlunga ingcindezi engeyinhle, indawo yaseshashalazini, uhlelo lokuhlunga lwenuzi, isihlungi sokuvikela iqoqo.
I-ZR-1100 ikhawunta yekoloni ezenzakalelayo
I-ZR-1100 othomathikhi yekoloni esiphikisayo ingumkhiqizo wobuchwepheshe owenzelwe ukuhlaziywa kwamagciwane amancane kanye nokutholwa kosayizi wezinhlayiyana ezincane. Isoftware enamandla yokucubungula izithombe kanye nezibalo zesayensi ziyenza ikwazi ukuhlaziya ukuhlaziya amakoloni amancane kanye nokuthola usayizi wezinhlayiyana ezincane, ukubala kuyashesha futhi kunembile.
Kukufanele ukutholwa kwe-microbiological ezibhedlela, ezikhungweni zocwaningo lwesayensi, eziteshini zezempilo nezokulwa nobhubhane, izikhungo zokulawula izifo, ukuhlolwa nokuhlukaniswa, ukulawulwa kwekhwalithi nobuchwepheshe, izikhungo zokuhlola ezemvelo, nezemithi, ukudla neziphuzo, izimboni zezempilo nezempilo, njll